Ny pädagozy Elena sy Boris Nikitin dia nanamboatra fomba maro hanatsarana ny ankizy. Amin'ireo, ny tena mahazatra dia kobam-pivoarana manokana. Izy ireo dia ny habaka maitso mahazatra, ny endrik'izy ireo dia voasarona amin'ny loko samihafa. Ao amin'ny laharana dia misy milalao karajia, araka izay isian'ny ankizy asaina hanangona ity sary ity.
Ny kilasim-panatanterahana miaraka amin'ny Nikitin cubes dia manampy amin'ny fampivoarana ny saina, ny fisainana ary ny fampisehoana ny sarin'ny spatial. Mandritra ny lalao dia mianatra ny rafitra, mandinika ary mifamahofaho ilay zaza.
Ahoana ny fomba hanaovana ny kibon'i Nikitin amin'ny anao manokana?
Ny kitapo Nikitin cubes dia amidy amin'ny fivarotan'ny ankizy, saingy afaka manamboatra ny tenanao ianao. Mba hanaovana izany dia mila mandefa ny takelaka kipain'i Nikitin sy ireo karatra amin'ny asa. Avy eo dia mila asiana pirinty izy ireo ary ampidirina amin'ny kitapo efa napetraka efa napetraka. Mba hahazoana antoka fa tsy manjavozavo ny loko dia tokony haposaka amin'ny kasety amin'ny farany ny kobaka.
Fanazaran-tena miaraka amin'ireo kibon'i Nikitin
Alohan'ny hanombohana ny fampiasana miaraka amin'ny ankizy, ny mpampianatra Nikitin dia manoro hevitra manaraka fitsipika marobe:
Ny fisafidianana ny andraikitry ny ankizy dia ilaina, miala amin'ny fitsipika avy amin'ny tsotra ka sarotra, manome ny asa mora indrindra amin'ny fanombohana ny kilasy.
Tsy ilaina ny manery ny fampiharana, ny zaza dia tokony ho liana amin'ny tenany. Raha tsy misy liana, ilaina ny miandry mandra-panehoany na handraisany anjara amin'izany.
Tsy ilaina ny mampiasa matetika amin'ny fampiasana ankizy, ny fandanilanan'izy ireo dia hitarika ho amin'ny fahalianana lava amin'ny fahalianana toy izany.
Ny asa rehetra dia azo zaraina ho dingana telo. Amin'ny voalohany, ny ankizy dia manangona sary iray izay atolotra amin'ny karatra na ao anaty boky. Rehefa mianatra ny fomba mora hiatrehana io asa io ny ankizy iray, dia asaina izy hisaintsaina ny mety ho endriky ny cubes.
Ny asa farany sy sarotra indrindra ho an'ny zaza dia fangatahana fanangonana sary sy lamina, izay tsy ao anatin'ny boky.
Ao amin'ny andraikitra rehetra, ny ray aman-dreny dia afaka mandray anjara amin'ny fanampiana ilay zaza. Aza manao ny andraikiny ho azy, ary ny ray aman-dreny dia tsy tokony hanome valiny manokana momba ny asan'ny ankizy.
Fantaro fa efa nanala ny lalao mora ny zaza: ny famonoana ny asa dia mitaky fotoana sy kely kokoa, dia miara-miasa amin'izy ireo izy raha tsy misy ny fahasarotana hita. Miaraka amin'izany fomba izany, ny ankizy izay nanapaka ny lalao, dia manangona sary izay heveriny ho azy.
Fametrahana ny maha-ray aman-dreny ao amin'ny biraon'ny rejisitra
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy iray amin'ny famakiana amin'ny teny Anglisy?
Nahoana ianao no manao batisa zaza?
Lalao ho an'ny fampandrosoana ny ankizy
Ny fivarotana an-tserasera MyToys.ru dia nanambara fanambarana tsy nisy toy ny tamin'ny 8 Martsa
Inona no atao amin'ny zaza fahatelo?
Ahoana no hilalao ny kilasy amin'ny asphalt - fitsipika
Ahoana no ahazoana SNILS amin'ny zaza?
Fampandrosoana fahaiza-maotera kely
Ahoana ny fomba hiarovana zaza amin'ny moka?
Fampianarana momba ny asa ataon'ny ankizy ao amin'ny akanin-jaza.
Famoronan-tanana avy amin'ny paositry ny tanana manokana
Nianjera tao Kanye West ny mpitsabo amin'ny hopitaly
Mikrosporia amin'ny saka
Fomba nentim-paharazana momba ny fahantrana
Copywriting - aiza no hanombohana?
Tavoahangy misy ronono - votoatin'ny kalorie
Kitapo fetsy mafy - hevitra ho an'ny kitapom-bary azo ampiharina
Ireo masoivoho Alaska ao amin'ny multivariate
Ny alèhy rehetra amin'ny tarehy - inona no tokony hatao?
Hividy siramamy ao amin'ny multiwark
Diet Pelagia amin'ny buckwheat - fitsipika momba ny fatiantoka mavesatra sy menamena mandritra ny herinandro
Fitaovam-bolo vita amin'ny sola-biriky vita amin'ny tanana
Irina Sheik dia saro-piaro ny sipany amin'ny Jennifer Lawrence
Amin'ny inona no mitafy jirofo?
Tavoahangy ho an'ny fihomehezana
Fanamboarana lakandrano ho an'ny lakozia
Vondron'antoko ho an'ny ankizy